လက်ကား XJC-Y01-08 သေးငယ်သောခလုတ်အင်အား transducer (1-1000N) ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စက်ရုံ။ | XJCSENSOR
XJC-Y01-08 သေးသေးလေးခလုတ်အင်အား transducer (1-1000N)
၂။ TED အသိဉာဏ်စံကိုက်ညှိခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်
3. ဖိအားအမျိုးအစား, မြင့်မားသောပြောင်းလဲနေသောတုံ့ပြန်မှု
4. Run-in ဖွဲ့စည်းပုံဒီဇိုင်း, ရှည်လျားသောဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း
၆။ Running-in ဖွဲ့စည်းပုံဒီဇိုင်း၊ ချုံ့မှု၊ လွယ်ကူ။ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်တပ်ဆင်မှု၊
၇။ ကြမ်းတမ်းသောပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အန္တရာယ်ရှိသောအခြေအနေများတွင်အသုံးပြုနိုင်သည့်လုံခြုံစိတ်ချရသောပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံနိုင်သောဆဲလ်၊ တက်ကြွသောတုံ့ပြန်မှုကြိမ်နှုန်း
Y စီးရီးအာရုံခံကိရိယာများသည်အဓိကအားဖြင့် single-pressure sensor များဖြစ်သည်။ အနိမ့်ဆုံးအချင်း ၈ မီလီမီတာမှ ၁၀၀ မီလီမီတာရှိသောအဝိုင်းအာရုံခံကိရိယာများကိုအဓိကတပ်ဆင်ထားသည်။
အားနည်းချက်မှာ sensor ၏အချင်းသည် 15mm ထက်နည်းသောကြောင့်အရွယ်အစားသေးငယ်ခြင်းကြောင့် fixed hole ကိုတပ်ဆင်။ မရပါ။
Sensor housing (elastic element, sensitive beam) သည်ပြင်ပအင်အား၏လုပ်ဆောင်မှုအောက်တွင် elastic deformation ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သို့မှသာ၎င်း၏မျက်နှာပြင်တွင်ကပ်ထားသောခုခံမှု strain gage (convert element) သည်ပုံပျက်လိမ့်မည်။ ခံနိုင်ရည် strain gage ပုံပျက်သောအခါ၎င်း၏ခုခံတန်ဖိုးကို (တိုး) ပြောင်းလဲလိမ့်မည်။ ပိုကြီးသောသို့မဟုတ်သေးငယ်သော၊ ထို့နောက်ခုခံအားပြောင်းလဲမှုကိုသက်ဆိုင်ရာတိုင်းတာသည့် circuit မှလျှပ်စစ်အချက်ပြ (ဗို့အားသို့မဟုတ်လက်ရှိ) သို့ပြောင်းလဲကာပြင်ပအင်အားကိုလျှပ်စစ်အချက်ပြအဖြစ်ပြောင်းလဲပစ်သည်။
၂။ အင်အားအရင်းအမြစ်အကွာအဝေးကိုအလွန်အမင်းမြင့်ခြင်း (သို့) အနိမ့်မကျခြင်းများကိုကန့်သတ်ပါ
4. မိုဘိုင်းဖုန်း HOME သော့ချက်စာမေးပွဲ
အမျိုးမျိုးသောတပ်ဆင်ခြင်းစမ်းသပ်ကိရိယာများတွင်ဥပမာ - ကင်မရာတပ်ဆင်ခြင်းဆိုင်ရာကိရိယာများ၊ မျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ခြင်းကိရိယာများ၊ ဘက်ထရီတပ်ဆင်သည့်ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ စပီကာတပ်ဆင်သည့်ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ ဂဟေဆော်သောပစ္စည်းကိရိယာများ၊ လ်တာနှင့်စသည်တို့ကို
၁။ ပုံမှန်လည်ပတ်နိုင်သည့်စွမ်းအားအကွာအဝေးသည် sensor ၏အပြည့်အဝစကေး၏ ၁၀% အထက်ဖြစ်သင့်ပြီးအကောင်းဆုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုမှာ ၈၀% အတွင်းဖြစ်သည်။
၂။ ပုံမှန်လည်ပတ်နိုင်သည့်စွမ်းအား၏အကွာအဝေး၊ ပစ္စည်းကိရိယာ၏အများဆုံးထုတ်လွှတ်မှု (servo motor, cylinders အစရှိသဖြင့်) overhooting force အား sensor ကိုရွေးချယ်သောအခါကြိုတင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။
၃။ အာရုံခံကိရိယာ၏တိကျမှု အကြွင်းမဲ့တိကျမှန်ကန်မှု၊ ဆွေမျိုးတိကျမှန်ကန်မှု၊ လိုအပ်သောတိကျမှန်ကန်မှုကိုအသုံးပြုပါ၊ ထပ်တိကျမှန်ကန်မှု၊ ရွေ့လျားတိကျမှန်ကန်မှုနှင့်တည်ငြိမ်မှုတိကျမှု၊ တိုင်းတာခြင်းတိကျမှု၊ ထိန်းချုပ်မှုတိကျမှု၊
၄။ တပ်ဆင်ခြင်းနည်းလမ်း - ဝက်အူတပ်ခြင်း၊ လေယာဉ်တပ်ခြင်း၊ ပြင်ပအတိုင်းအတာလိုအပ်ချက်များ - အရှည်၊ အကျယ်၊ အမြင့်၊ အပြင်ဘက်အချင်းစသည်ဖြင့်။
၅ ။ အတိုးအပေါက်၊ ဖိအားတိုင်းတာမှု၊ ဖိအားတိုင်းတာမှု၊
ရှေ့သို့ XJC-H120 ချုံ့ Load ဆဲလ်
နောက်တစ်ခု: XJC-Y01-13 ခလုတ်ဝန်အင်အားအာရုံခံကိရိယာ (0-1KN)
XJC-Y01-13-A ဝန်အင်အားသုံး Transducer (0-1KN)
XJC-H120 ချုံ့ Load ဆဲလ်
XJC-Y18 ချုံ့ Load ဆဲလ်